Ndofunga wabaya chipikiri mumusoro neizvi. Zvinogona kunge zvakakodzerwa nenhepfenyuro hombe kana masangano kuti vagare pakubudirira vasati vaenda padanho ravo rinotevera, asi kune mamwe mabloggi, zvinonzwisisika zvakanyanya kunamatira pakuburitsa zvinyorwa zvinowanzoitika uye zvine chinangwa zvekutarisana nevateereri. Ehezve iyo nguva nenguva kupenya mune vanochera pani kana zvinogumbura inzira yakanaka yekuvashandura kuti ive yenguva dzose.
Ndakave nezvinyorwa zvishoma zvinozivikanwa pablog rangu, asi kutarisisa kwaizogara kuchidonha kusvika padanho repashure pevhiki kana zvakadaro kushanya kwese + kunoshandura mwero.
Ini ndinofungidzira kunyora zvemukati zvakanangana nedigg / zvinonaka / kugumburwa vhiki rega rega zvakakosha kuti vanhu vatsva vawane saiti yako. Saka, ndeyayo marathon mazuva ese, asi kumhanya mukupera kwesvondo 🙂
Kunoshamisa kwekufungidzira pane nyaya dzinochengeta blog / saiti ichienderera nekuenderera. Ndinovimba kukuona uchitenderera paThe Bean.
Sep 4, 2008 na5: 00 PM
Ndakaona iyi chaiyo patter yeiyo 48 kusvika 72 awa kutenderera uye ndakaedza kuyedzeredza neyakauchikwa nzira yekudzoka kune yakakurumbira posvo asi uchiri kupa zvine chinangwa maposvo mumutsara wevakajairika. Tariro ndeyekuti kudzokororwa kwekukwezva kutsva kuchachengetedza ma newbies akatenderedza kwenguva yakareba zvakakwana kuti vazive mhando yemutengo wenguva dzose. Kuverenga kwangu kudiki asi kubvira pandatora nzira iyi ndakura paavhareji kuverenga (iyo yegumi-mazuva kutenderera avhareji) ingangoita 25% pamwedzi mina yapfuura.